I-Nootropics PRL-8-53: Ukuphucula inkumbulo kunye nokuFunda kokuFunda?
Uhlobo lwe I-PRL-8-53 njengesiyobisi esisebenza ngengqondo emva phaya kwii-1970s zakuqala. UNikolaus Hansl, uprofesa kwiYunivesithi yaseCreighton, wafumanisa ukuba le nootropic ngelixa wayesebenza kwi-aminoethyl meta benzoic acid esters.
Ukusukela oko yaqalwa, esi songezelelo senziwe kuvavanyo lokuqala kunye novavanyo lomntu. Uphando lweklinikhi yayilelona bungqina bokuba i-PRL-8-53 yokufunda ikhulisa inkumbulo yexesha elifutshane kunye nokutyibilika komlomo.
I-PRL-8-53 ayifumenanga ukuvunywa kwe-FDA, kodwa sisongezo esingacwangciswanga e-US. Unokwenza ngokukhululekileyo i-PRL-8-53 yokuthenga njengechiza elithengiswayo.
I-PRL-8-53 sisiphumo se-benzoic acid kunye ne-benzylamine. Ngokwenzululwazi, yaziwa ngokuba yi-3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate.
Ukusukela ngasekupheleni kweminyaka yee-1970, i-PRL-8-53 ibingumsindo njengesiyobisi esisebenza ngokunyusa ukusebenza kwengqondo. Ubuncinci, kukho uvavanyo lomntu oluyimpumelelo oluxhasa ukusebenza kwalo. Ngaphandle koko, i-PRL-8-53 uphononongo kwiReddit ixhasa ukusebenza kwesi songezelelo ekuphuculeni imemori kunye nokufunda.
UNjingalwazi Hansl ekuqaleni wakufumanisa oko I-PRL-8-53 nootropic inyusa inkumbulo yexesha elifutshane kunye nokukhumbula ngamazwi. Nangona kunjalo, eli chiza libala uxinzelelo, uxinzelelo, uxinzelelo kunye nokudinwa.
Ngenxa yezifundo zophando ezoneleyo kwi-PRL-8-53, eyona ndlela yokusebenza kwayo iyimfihlakalo. Nangona kunjalo, izazinzulu zicinga ukuba ichiza liphucula ukusebenza kwengqondo ngeendlela ezintathu.
I-PRL-8-53 nootropic isebenze ukugcinwa kwe-acetylcholine, eyintloko ye-neurotransmitter, enoxanduva lokusebenza imemori kunye nokufunda.
Eli chiza lisebenza ngengqondo likwasebenza kwinkqubo yedopaminergic ngokumodareyitha amanqanaba empilo ye-dopamine. Ngaphezu, ukuthatha Ukudakumba kwe-PRL-8-53 Iyeza liya kuthintela ukuveliswa kakhulu kwe-serotonin. Iziphumo zebhotile ziphakamisa amanqanaba oxinzelelo ukulawula uxinzelelo, ukutshintsha kwemozulu kunye nokuqaqanjelwa sisisu.
Yandisa amandla okuFunda
I-PRL-8-53 powder ibonisa ukuphucula ukuqonda kunye nokukwazi ukufunda. Ukongezwa kubangela ukukhumbula ulwazi, amagama kunye neengcinga ezahlukeneyo. Ke ngoko, iye yasisiyobisi sokufunda phakathi kwabafundi abafuna ukuhamba ngovavanyo olunzima.
I-PRL-8-53 yokufunda inokuphucula ukugxila, ngakumbi xa uzama ukuqonda iikhonsepthi ezintsha. Ezinye iingcali zengqondo zibanga ukuba ukuthatha eli chiza lilumkileyo kukugcina usendleleni, kwaye uya kuncipha xa uchaza izinto ezintsha. Ezi zibonelelo ze-PRL-8-53 zisenokuba kukusa okutsha kwabantu abakhaliphileyo abafuna iimviwo ze-physics ezinobunkunkqele okanye iimvavanyo zomlomo ezingekho emzimbeni.
Esinye seziphumo eziphambili ze-PRL-8-53 kubandakanya ukukhulisa inkumbulo. I-nootropic isebenza i-acetylcholine kunye nenkqubo ye-dopaminergic, ebalulekileyo ekuqondeni.
Kuvavanyo lweklinikhi olubandakanya izifundo zempilo ezingama-47, unjingalwazi uHansl uqaphele ukuba abo bathathe i-PRL-8-53 benze ngcono kuvavanyo lwenkumbulo kunabathathi-nxaxheba kwi-placebo. Ngaphandle koko, le nkumbulo inokuhlala phantse iveki.
Ngaphambi kokuzama izifundo zabantu, uHansl wayeqaphele ukuba i-PRL-8-53 izibonelelo zeempuku kwimemori. Ukongezwa kwenza imodeli ye-murine ukuba ikhumbule kwaye idibanise impendulo kwiimeko ezixinzelelekileyo.
Ukuphucula ukukhuthaza kunye nokunciphisa ukukhathala
I-PRL-8-53 yoxinzelelo lweziyobisi ibonisa iipropathi zedopaminergic. Ikhompawundi inyusa umsebenzi we-dopamine, ikhemikhali yengqondo echaphazela inkuthazo, imo yokuqina, kunye nokunciphisa ukudinwa. Ke ngoko, ikhuthaza impilo yengqondo, ngokubakho kokuchasana nokuphazamiseka kwengqondo okunje nge-ADHD kunye ne-schizophrenia.
Ngaphandle kweempembelelo ezilungileyo ze-PRL-8-53, akufuneki usebenzise i-nootropic njengesiqendu seyeza lakho. Le khompawundi ayenzelwanga iinjongo zokunyanga okanye ukunyanga izifo.
Uyithatha njani i-PRL-8-53?
Okuqhelekileyo I-PRL-8-53 idosi imalunga ne-5mg ngosuku, ithathwa njengesongezelelo somlomo. Nangona kukho uphando olunqongopheleyo lokumisela awona manqanaba akhuselekileyo edosi, ityala lokuqala lomntu lisebenzise i-5mg. I-flick ngokusebenzisa ezinye ze-PRL-8-53 ukuphonononga iqinisekisa ukuba abanye abasebenzisi abanomdla bathatha i-10mg ukuya kwi-20mg yesongezelelo.
Ukuba ulawula isongezelelo sokwakhiwa kwememori yexesha elifutshane, njengaxa usenza uvavanyo, qinisekisa ukuyisebenzisa iiyure ezimbini ngaphambi kokuzilolonga.
I-PRL-8-53 nootropic iyafumaneka ngomgubo, iipilisi, kunye neefom zelwelo. Unokukhetha ukugwinya ithebhulethi okanye uyongeze kwisiselo sakho; nantoni na ekulungeleyo. Nangona unokukhetha ukulawulwa kweelwimi ezincinci, le ndlela inokubangela ukuba ulwimi lwakho luthambe. Uninzi lwabasebenzisi banokukhetha ukuthatha i-PRL-8-53 ngomlomo.
Okwangoku, akukho ngcebiso ifanelekileyo ye-PRL-8-53. Unxibelelwano olunokubakho lweli khompawundi kunye nezinye iziyobisi ezisebenzayo alwaziwa. Ngaphandle koko, i-PRL-8-53 inamandla aphezulu, kwaye ke, akuyomfuneko ukuyidibanisa nezinye ii-nootropics ezonyusa inkumbulo.
Asicebisi okanye sicebise nayiphi na Isitaki sePRL-8-53. Ubuncinci, kuya kuba ngcono ukuba awunakulinga ngeziyobisi ezinobuchule ezineempembelelo ezifanayo. Ngaphandle kwesilumkiso esiqatha, abanye abasebenzisi ngaphakathi koluntu lwengqondo bavuma ukuba ingqokelela ye-PRL-8-53 powder kunye ne-Alpha-GPC, ipiracetam, i-IDRA-21, kunye ne-theanine ibanika izibonelelo zonyango.
Ngaba zikhona iziphumo ebezingalindelekanga ze-PRL-8-53?
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho ziphumo zibhaliweyo ze-PRL-8-53. Ezona zibonelelo zifumanekayo zibuyela emva kwii-1970s ngexesha leklinikhi kunye novavanyo lwangaphambi kokuvavanywa kwe-nootropic. Kufundo lomntu, abathathi-nxaxheba ababonakalisanga zimpawu zibi kwidosi ye-5mg ngosuku.
Nangona kungekho ziphumo zeklinikhi ze-PRL-8-53 zirekhodi, qiniseka ukugcina iidosi ezisezantsi. Ngokophando lwempuku, amaxabiso aphezulu esi songezelelo enza ukuba kungahambi kakuhle.
Kukho amava omsebenzisi angenakubalwa kwiVenkile yeReddit kunye neAmazon ngokubhekisele kwiziphumo ze Uxinzelelo lwe-PRL-8-53 akukho.
Jonga ezinye ze PRL-8-53 uphononongo;
Ukufunda kunye neMemori phucula
“Ndisebenzisa i-PRL-8-53 kakhulu xa ndinokufunda ngentloko. Kwenza umahluko omkhulu kwindlela endikwazi ngayo ukukhumbula izinto ngokukhawuleza. ”
“Ndiqaphele ukwanda kokuthetha ngokuthetha nePRL mna. Idityaniswe necaffeine, sisixhobo esihle sokufunda. ”
“Ndiqale ngeedosi ezincinci kwaye ndasebenza ukuya kwinqanaba elininzi. Ndiva ukuba i-10mg yeyona idosi yemihla ngemihla… Nangona kunjalo, ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame i-20mg ngolwesiHlanu kuvavanyo lwam lweNeuroscience kwaye ndothuswa kukuphuculwa kokukhumbula… . ”
"Ndiyithatha kusasa xa ndivuka (11am) ngeNoopept, L-theanine, bupropion, vortioxetine, kunye ne-tianeptine ... ngenene akunakwenzeka ukuqonda ukuba yintoni eyenzayo ngesixa esinzima samachiza ngokwemiqathango yokufika komkhosi…"
“Ngoku ndenza i-IDRA-21 kunye ne-PRL-8-53 yonke imihla. Ndiyayithanda le combo, kwaye yenza ukuba kube lula ukukhumbula nokuqonda izinto ezintsha. ”
Njengazo zonke iilwimi ezincinanana, inencasa intle. Nangona kunjalo, ayiyonto imbi njengoNoopept… iyakwenza nolwimi lwakho lube ndindisholo amaxesha ambalwa okuqala… Iinzuzo ngokuqinisekileyo ziyodlula incasa. ”
Iziphumo ezibi ze-PRL-8-53
"Ndifumene inkumbulo embi ngakumbi emva kokuba iziphumo ziye zaphela nangona iidosi ezincinci. Emva kwedosi yokugqibela, ndiye ndaziva ndingenakuchazeka, kwaye ndingaziva mnandi noko. ”
Umsebenzisi ongaziwayo uthi;
"Kwiidosi ezingaphezulu kwe-30mg ngomlomo kunye ne-15mg ngentloko, bendinentloko kwaye ndinempembelelo engaqhelekanga ngokubona kwam."
I-PRL-8-53 powder yi-nootropic ethembisayo ehlala ingafakwanga kwindawo yezenzululwazi. Obona bungqina bubambekayo bokusebenza kwayo buneminyaka engamashumi amahlanu. Nangona kunjalo, ii-neurohackers ezinomdla zibhankisha kuyo njengesixhobo sokukhumbuza imemori esineziphumo ebezingalindelekanga ze-PRL-8-53.
Ukongezwa kulungele imemori yexesha elifutshane. Ulwazi oluqokelelwe kubasebenzisi abanamava kunye nezifundo zophando ezikhoyo ziyaqinisekisa ukuba Uxinzelelo lwe-PRL-8-53 iyeza liya kuphucula inkumbulo ukuya kuthi ga kwi-200%.
Ukudibana kwale nootropic kunye nezinye iziyobisi kusengummangaliso. Ke ngoko, ukhuseleko kunye nokunyamezelana kwayo akwaziwa. Ke, ukuzama isitaki sePRL-8-53 ayisiyiyo enye indlela. Dibana nogqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe i-PRL-8-53 kunye nezinye iziyobisi.
Unokwenza i-PRL-8-53 ithenge ngomgubo okanye ipilisi njenge yongeza i-nootropic.
IHansl, NR, kunye neMead, BT (1978). I-PRL-8-53: Ukuphuculwa kokufunda kunye nokugcinwa okulandelayo ebantwini njengesiphumo sedosi ephantsi yomlomo yearhente yengqondo entsha. I-Psychopharmacology (Berl).
UHansl, NR (1974). Inoveli ye-spasmolytic kunye ne-CNS esebenzayo: 3- (2-benzylmethylamino ethyl) benzoic acid methyl ester hydrochloride.
UMcGaugh, JL, kunye noPetrinovich, LF (1965). Iziphumo zeziyobisi ekufundeni nakwimemori. Uphengululo lwaMazwe ngaMazwe lweNeurobiology.
UKornetsky, C., Williams, JE, kunye nentaka, M. (1990). Ukuhoya kunye nefuthe lokunyanga iziyobisi zengqondo. Uphando lweNIDA.
IGiurgea, C. (1972). I-Pharmacology yomsebenzi wokudibanisa kwengqondo. Ukuzama kwinqanaba le-nootropic kwi-psychopharmacology. Eyona Pharmacol (eParis).
IHindmarch, mna (1980). Umsebenzi we-Psychomotor kunye neziyobisi ezisebenza ngengqondo. Ijenali yaseBritane ye-Clinical Pharmacology.
RAW PRL-8-53 umgubo (51352-87-5)
2. Yintoni i-PRL-8-53?
4. Izibonelelo zePRL-8-53
5.Uthatha njani i-PRL-8-53?
7. Ngaba zikhona iziphumo ebezingalindelekanga ze-PRL-8-53?
Amava abasebenzisi be-8